Steve Jobs: အာရုံ၊ အမြင်၊ ဒီဇိုင်း Martech Zone
စတိဗ်ဂျော့ဘ်စ် - အာရုံစိုက်ခြင်း၊ အမြင်၊
တနင်္ဂနွေ, ဒီဇင်ဘာလ 18, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သောကြာနေ့ Podcast တခုမှာကျနော်တို့ဒီနှစ်မှာဖတ်ရှုရမယ့်အကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ စတိဗ်ဂျော့ဘ်။ ငါသိပ်မကြာသေးမီကစာဖတ်ခြင်းမများသေး - ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ် Jenn ငါ့အဘို့စာအုပ်ဝယ်ယူဘို့!
ဒီစာအုပ်ကဂျော့ဘ်အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပွဲတော်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ငါထင်တာကတော့ဂျော့ဘ်ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြissuesနာတွေရဲ့အောက်ဘက်မှာဟန်ချက်ညီတဲ့ပုံရိပ်ရှိတယ်။ ငါပြောတယ် ရက်စက်သော ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကျန်းမာရေး၊ သူ့မိသားစု၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ ၀ န်ထမ်းတွေ၊ လူအများစုက Apple ကိုအံ့အားသင့်စွာဖြင့်ကြည့်ကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိတန်ဖိုးအရှိဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အားနည်းချက်တစ်ခုရှိခဲ့သည်… Apple သည်တစ်ချိန်က PC စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးနောက်ခြေမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ။
အနုတ်လက္ခဏာများလုံလောက်ပါသည်။ ဂျော့ဘ်သည်ထူးခြားသောလူသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏လေဆာအာရုံစိုက်မှုနှင့်အမြင်အာရုံသည်သူ၏အလျှော့မပေးသောဒီဇိုင်းတွင်အရသာနှင့်ပေါင်းစပ်။ သူ၏ကုမ္ပဏီကိုထူးခြားစေခဲ့သည်။ အလုပ်များသည် desktop ကွန်ပျူတာစက်မှုလုပ်ငန်း၊ desktop ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း၊ ဂီတလုပ်ငန်း၊ ကာတွန်းရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ဖုန်းလုပ်ငန်းနှင့်ယခုတက်ဘလက်စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းသက်သက်မျှသာမဟုတ်ဘဲထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကိုသူအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ငါကအက်ပဲလ်ကလက်လီအရောင်းဆိုင်တွေဖွင့်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါငါကဝေဖန်ရေးသမားတစ်ယောက်ပါ။ ငါကအခွံမာသီးထင် ... Gateway ကသူတို့ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်အထူးသဖြင့်ကတည်းက။ ဒါပေမယ့်လက်လီအရောင်းဆိုင်တွေကကုန်ပစ္စည်းရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကဂျော့ဘ်တွေပြသခဲ့တာကိုထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပြဖို့ပဲ။ အကယ်၍ သင်သည် Apple စတိုးသို့မရောက်ခဲ့လျှင်သင်အမှန်တကယ်စစ်ဆေးသင့်သည်။ သင် Best Buy သို့ ၀ င်ကြည့်လျှင်ပင် Apple သည်မည်သို့ကွဲပြားစွာပြသခဲ့သည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဝေါလ်တာအိုင်းဇက်ဆင်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းပြောပြသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်စာအုပ်ထဲစွဲကပ်ခဲ့သည်။ ငါတို့အားလုံးမြင်သောဂျော့ဘ်၏ရုပ်ပြောင်တစ်ခုရှိခဲ့သော်လည်းဤစာအုပ်ထဲတွင်အခန်းတစ်ခန်းတည်း၌ရှိနေသောလူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းမှတစ်ဆင့်ဤစာအုပ်တွင်အလွန်မယုံနိုင်စရာအသေးစိတ်များရှိသည်။ သို့သော်စာအုပ်သည်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိချေ။ Forbes မဂ္ဂဇင်းကမကြာသေးမီကအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ဝေခဲ့သည် Think Different စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအကြောင်းပါ.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ စာအုပ်မှကျွန်ုပ်ထွက်သွားခဲ့သည့်သတင်းစကားသည်သင်၏ရူပါရုံကိုမဆုတ်မနစ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင်အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်မည်မျှစိတ်အားထက်သန်သကဲ့သို့မိမိကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သာအောင်မြင်သည်ဟုခံစားရသည်။ ငါအဲဒီမှာဂျော့ဘ်လိုပဲစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံဖို့အဆင်သင့်ပဲဆိုတာမသေချာဘူး။ တစ်နည်းဆိုရသော်သူသည်စစ်ပွဲများစွာကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊
Avatar တံဆိပ်တပ်ခြင်း: အေးလား၊
မင်းရဲ့ PROskore ကဘာလဲ။